လကျမောငျးကပျရောဂါ နဲ့ ကုသနညျးမြား - ApannPyay Media
ညာဘကျဖွဈလြှငျပြောကျလှယျသညျ။အသုံးပွုနေ၍။ဘယျဖကျဖွဈလြှငျပိုကွာသညျ။ အသုံးနညျး၍။(သနျရာလကျကိုဆိုလိုပါသညျ။ ဘယျသနျလြှငျ . ညာပြောကျခဲမညျ)
အနှိပျခံစရာမလိုပါ။ လကေ့ငျြ့ခနျးမှနျမှနျလုပျလြှငျ၁၄ ရကျအတှငျးသကျသာပြောကျကငျးနိုငျပါသညျ ။ဆားကွပျထုပျထိုးနိုငျပါသညျ။ မိဿလငျကွပျထုပျကတော့အကောငျးဆုံးပါ။ ရနှေေးငှခေံ့ထိုးပါ။ အပူခံနိုငျရုံသာထိုးပါ။မုံညှငျးဆီလိမျးပွီးထိုးလြှငျ ခြောမှပွေီ့း အပူလောငျသကျသာသညျ။
ဇကျကြီးပေါငျးနရောတှငျ သင်ျဘောရှကျမီးကငျပွီးကပျပေးပါ။ဘနျဒါရှကျ(ဗာဒံရှကျ)ကပျလြှငျလညျးရသညျ။ခငျြးခွောကျမှုံ့ ၃ဆ၊လငျးနမှေုံ့ ၁ဆ ၊ သဈကွမျးပိုးအခေါကျမှုံ့၁ဆ ရော ရနှေေးနှငျ့ဖြျော လကျမောငျးဆုံတှငျအုံစညျးလြှငျလကျမောငျးကပျရောဂါပြောကျပါသညျ ။
လက်မောင်းကပ်ရောဂါ နဲ့ ကုသနည်းများ
ညာဘက်ဖြစ်လျှင်ပျောက်လွယ်သည်။အသုံးပြုနေ၍။ဘယ်ဖက်ဖြစ်လျှင်ပိုကြာသည်။ အသုံးနည်း၍။(သန်ရာလက်ကိုဆိုလိုပါသည်။ ဘယ်သန်လျှင် . ညာပျောက်ခဲမည်)
အနှိပ်ခံစရာမလိုပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်လျှင်၁၄ ရက်အတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည် ။ဆားကြပ်ထုပ်ထိုးနိုင်ပါသည်။ မိဿလင်ကြပ်ထုပ်ကတော့အကောင်းဆုံးပါ။ ရေနွေးငွေ့ခံထိုးပါ။ အပူခံနိုင်ရုံသာထိုးပါ။မုံညှင်းဆီလိမ်းပြီးထိုးလျှင် ချောမွေ့ပြီး အပူလောင်သက်သာသည်။
ဇက်ကျီးပေါင်းနေရာတွင် သင်္ဘောရွက်မီးကင်ပြီးကပ်ပေးပါ။ဘန်ဒါရွက်(ဗာဒံရွက်)ကပ်လျှင်လည်းရသည်။ချင်းခြောက်မှုံ့ ၃ဆ၊လင်းနေမှုံ့ ၁ဆ ၊ သစ်ကြမ်းပိုးအခေါက်မှုံ့၁ဆ ရော ရေနွေးနှင့်ဖျော် လက်မောင်းဆုံတွင်အုံစည်းလျှင်လက်မောင်းကပ်ရောဂါပျောက်ပါသည် ။